नेपालीहरुको प्रतिक्षाको घडी समाप्त: आज सन्दिप लामिछ्नेले खेल्न पाउने.. के भन्यो दिल्लीले ?
काठमाडौं । यसपटकको भारतीय किर्केट लिग आईपीएल नेपाली क्रिकेटप्रेमीहरुका लागि केहि फरक र उत्साहित पर्ने खालको हुने अपेक्षा गरिएको थियो। किनकी, जहाँ नेपाली युवा स्पिनर सन्दिप लामिछाने पनि दिल्ली डेयरडेभल्सको लागि छनोट भएका थिए।
तर, आईपिएल अन्तर्गत ४५ वटा खेल भइसक्दा पनि सन्दिप एक पटक पनि खेल्ने मौका भने पाएनन्। दिल्ली अब लगभग प्लेअफबाट बाहिरीसकेको छ। यसैबीच आज दिल्ली र रोयल्स च्यालेन्जर बेंगलोरबीच नेपाली समय अनुसार राती सवा ८ बजे खेल हुँदैछ। प्रतियोगिताभर निकै कमजोर बलिङका कारण नै हार्दै आएको दिल्लीले ११ वटा खेल खेल्दा मात्र ३ वटामा मात्र जित हात परेको छ।
उता बेंगलोरको पनि उस्तै हालत छ। उसले पनि ११ खेलमा ३ खेल जित्दै जम्मा ६ अंक जोडेको छ। यस्तो अवस्थामा आज दिल्लीले नेपाली सेन वार्न सन्दिप लामिछानेलाई खेलाउने सम्भावना रहेको छ। अक्सन मार्फत २० लाख भारुमा दिल्लीले किनेका सन्दिप लेग ब्रेक गुग्लीका लागि निकै चर्चित छ। आज देल्ली डेयरडेभिल्सले आफ्नो अफिसियल फेसबुक तथा ट्वीटर एकाउन्ट मार्फत ‘ट्रेनिंग डन रेडी फोर गेम’ भन्दै सन्दीपले बलिङ गर्न लागेको फोटो पोष्ट गएको छ।
सन्दिपले आईपिएलमा आफ्नो पहिलो डेभ्यु गर्ने मौका खोजी गरिरहेका बेला मैदान छिर्न सक्ने ठूलो सम्भावना देखिएको छ। अहिले सम्म जम्मा ६ अंक मात्र बटुलेको दिल्ली अब अधिकारी रुपमा खेलबाट बाहिरिन मात्र बाँकि छ। अबका तीन खेल लगातार जित्दा पनि उसको प्लेअफ जाने सम्भावना निकै कम छ। के सन्दिप आज दिल्लीको लागि खेल्न मैदान उत्रेलान् त ? त्यो भने आज राति ८ बजे सम्म प्रतिक्षा नै गर्नु पर्ने हुन्छ।
प्रकाशित : शनिबार, बैशाख २९, २०७५१६:४३
आइपीएल क्रिकेट: कोलकाताले दिएको २४६ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउँदै पन्जाव, यस्तो छ ताजा स्कोर